किन दुख्छ ढाड? कसरी होला निको? :: PahiloPost
30th May 2018, 04:59 pm | १६ जेठ २०७५
सहन नसक्ने गरी ढाड दुख्छ। हात गोडा झमझमाउने हुन्छ। धेरै समय बसेपछि उठ्न गाह्रो हुन्छ। कम्मर अत्याधिक दुख्छ। शरीरको एक पाटो निरन्तर दुखिरहन्छ। यी समस्या लिएर अस्पताल पूग्ने मानिस दिनहुँ बढ्दैछन्। कसैले यसलाई 'ब्याक पेन' भन्छन त कोही कम्मरको दुखाई। समग्रमा भन्दा यो मेरुदण्डको दुखाई हो।
मेरुदण्डको कनेक्सन शारीरिक सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। लामो समय उभिएर काम गर्नेहरुको मेरुदण्ड धेरै दुख्ने गर्छ। एकै खाले काम गर्ने किसानलगायत कारखानामा काम गर्ने कामदारलाई मेरुदण्डको समस्या धेरै हुन्छ। मेरुदण्डमा समस्या भएमा पूरै ‘स्पाइनल कोलम’ नै दुख्ने हुन्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा 'नेक पेन' र 'ब्याक पेन' भनिन्छ।
मेरुदण्ड बिग्रदै गएपछि क्यान्सरसम्म हुन्छ जसलाई 'स्पाइन क्यान्सर' भनिन्छ। ५५ देखि ६० को उमेर समूहका यो क्यान्सरको सम्भावना ज्यादा हुन्छ। अत्यधिक दुखाउने क्यान्सर मध्ये एक हो मेरुदण्डको क्यान्सर। यसको उपचार महंगो उस्तै छ। किनकि, क्यान्सर पहिचानको लागि एमआरआई, सिटिस्क्यान जस्ता विधि अपनाउनुपर्छ।
'सर्जिकल ब्याक पेन' र 'ननसर्जिकल ब्याकपेन' चिकित्सकिय भाषाका दुइ टर्म हुन। देखिएका ७० प्रतिशत समस्या 'ननसर्जिकल' हो। औषधि, फिजियोथेरापी र जीवनशैली परिवर्तनबाटै अधिकांश समस्या निको हुन्छ।
(स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र साँगा (काभ्रे)का मेडिकल डाइरेक्टर ढकालसंगको कुराकानीमा आधारित)
ह्विलचेयरबाटै राजुको डाक्टरी दौड : बने नेपालकै पहिलो र एकमात्र फिजियाट्री विशेषज्ञ
किन दुख्छ ढाड? कसरी होला निको? को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Shambhu bk [ 2018-05-30 22:09:50 ]
(1)एकसर साइज बाट
(2) नसाको उपचार बाट